Ao Hong Kong, ady ataon’ireo mpanao gazety amin’ny fanivanantena, fandrahonana ary herisetra ataon’ny polisy manohitontohina ny fampitambaovao momba ny “revôlisiônan’ny Elo” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Janoary 2020 8:31 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, čeština , Español, English, Swahili, 한국어, English
Taorian'ilay herisetra tambabe tamin'ny 13 Oktôbra, asehon'ireo mpiasan'ny Apple Daily News ny fahavononany hitazona ny fampandehanana ny trano famoahambaovaony. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'i Chan Pui Man.
Tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia nandalo fisedrana goavana ireo mpanao gazety miasa ao Hong Kong rehefa mikirakira ny vaovao momba ny “revôlisônan'ny elo”, ilay hetsipanoheran'iero mpandàla demaokrasia mitaky fifidianana malalaka sy tsy mitanila. Tsy hoe fotsinymety hiharan'ny herisetra ry zareo eny ampikarohana vaovao momba ireo fifandonana ifanaovan'ny polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana, fa rehefa mandao ny kianja ka handeha hamonjy ny biraony, tsy maintsy mbola iaretan'ny sasany ihany koa ny tsindry avy amin'ny trano famoahambaovao misy azy ireo ny amin'ny tokony hanaovany fanivanantena, na ny filàmbaniny ataon'ireo jiolahimboto mpomba an'i Beijing.
Hatramin'ny nanombohan'ny polisy nandrava ireo sakana najoron'ny mpanao hetsipanoherana teny amin'ireo toerana nisy ny toby tranolay goavana nomena anarana hoe Occupy Central (Bodoy ny Afovoany), saika isanandro vaky no nisy ny fifandonan'ny polisy sy ireo mpanao hetsipanoherana. Tafalatsaka anelanelan'ireo polisy sy mpanao hetsipanoherana, lasa mety haratra ihany koa ireo mpanao gazety mpaka sary. Tsy ankavitsiana no efa nahitàna mpakasary ho an'ny fahitalavitra notifirin'ny polisy tamin'ny tsifotra dipoavatra na natositosiky ny polisy nandritra ny fotoana nanaovany ny fanangonana vaovao. Matetika no tsy anavahan'ny polisy izay mpanao fihetsiketsehana sy mpanangona vaovao any, ka dia asiany ireto farany rehefa ilay eny aloha eny maka sary iny.
Tranonkalambaovao efatra tsy miankina : inmediahk.net, SocREC, USP ary Local Press, no namoaka fanambaràna iray niraisany niampangany ny fanafihana ninian'ny polisy natao tamin'ireo mpanao gazety tamin'ny 15 Oktôbra nandritra ny fanaparitahana ireo mpanao hetsipanoherana teo amin'ny Arabe Lung Wo nanoloana ny foiben'ny governemanta :
Amin'ny 3 ora maraina, raha izy mbola teo am-panangonana vaovao momba ny fanadiovana ny Tamar Park, nosintonina nankany anaty laharan'ireo polisy mpandrava korontana ny mpanangombaovao iray an'ny SocREC ary voadaroka nandritra ny telopolo segondra teo ho eo. Avy eo, notaritaritinà polisy roa teny amin'ny arabe nandritra ny 30 segondra ary dia natsipy tao anaty fiara fitondràna voafonja. Im-betsaka ilay mpanangombaovao naratra no nampiseho ny karatra maha-mpanangombaovao azy tao anatin'izay kalvery izay, fa tsy nahasakana ireo polisy izany. Vao mainka aza ny nanompa azy no nataon'ireo. Fa nony nisy manamboninahitra misahana ny gazety ao amin'ny polisy tonga, ary nanamarina ny momba azy, izay vao nomena alàlana handeha izy. Nandeha nitsabo tena tao amin'ny Queen Mary Hospital ilay mpanao gazety ary voalaza amin'ny antsipirihany tao anatin'ny tatitry ny mpitsabo ireo ratra hita teny amin'ny tavany, ny handriny, ny orony, ny vavany ary ny tànany havia.
Toy izay koa, ny mpanangona vaovao avy ao amin'ny inmediahk.net niasa tao amin'ny tonelina iray ao amin'ny Arabe Lung Wo dia nambanan'ny polisy iray tampoka tamin'ny tsifotra dipoavatra. Nanaiky ny tenin'ilay polisy izy no sady nihemotra, saingy voatondraka teny amin'ny tavany tsy nisy fampiomanana ihany ; na im-betsaka nampiseho ny karatra tany aminy aza, nosamborina sy nasiana rojo vy izy. Rehefa nanao izany, nivazavaza ilay polisy : “Mpanao gazety ? Dia maninona ?” ” Na ny manao gazety aza tsy mahazo maka sary ny aty ambava-ady.” Navotsotra izy taorian'ny fanamarinana ny momba azy. Iray hafa mpanangona vaovao avy ao amin'ny inmediahk.net indray no voavelin'ny ampingan'ny polisy iray teny amin'ny lohany raha iny izy nihemotra iny.
Tsy voatery hahita ny lahatsorany hivoaka an-gazety akory ireo mpitatitra vaovao nanao sorona ny tenany nanaraka ny zava-nitranga teny ambava-ady, noho ny fanivanantena ampiharin'ny ao amin'ny biraon'ny fanoratana. Marobe ireo rantsan'ny media ao Hong-Kong, izay faritra ambany rafi-pitantanana manokan'i Shina, no efa natahotra sahady ny ho very vola azony avy amin'ny resaka dokambarotra aterak'ireo fifandraisana ara-pandraharahàna ananany ao amin'ny tanibe, na tahotra sao tsy hahafaly ny governemanta ao Beijing. Fironana iray izay nihamafy hatrany niaraka tamin'ireo hetsipanoherana vao haingana mitaky ny hisian'ny rafitra misokatra amin'ny fanendrena ireo kandidà ho eo amin'ny toeran'ny lehiben'ny mpanatanteraka ao an-tanàna, izay mifanohitra tanteraka amin'ny hetahetan'ny tanibe hanana kaomity iray hahitàna betsaka ireo mpomba an'i Beijing.
Ny 15 Oktôbra, ny talen'ny fampahalalam-baovaon'ny TVB, ilay foiben'ny fahitalavitra malaza indrindra ao an-tanàna, dia nanome baiko an'ireo tarika mpamoaka lahatsoratra mba hanova ireo fanehoankevitra ho lasa feo lafika ao anaty tatitra an-dahatsary iray momba ireo lazaina fa herisetran'ny pôlisy. Porofo tsy isalasalàna ireo totohondry asehon'ny sary sy ireo daka nandritra ny efatra minitra izay nataonà pôlisy marobe taminà mpanao fihetsiketsehana iray, taminà zoro iray maizimaizina.
Ny ampitso, mpikambana 28 mpiasa ao amin'ny biraon'ny fanoratana no namoaka fanambaràna iray niombonana milaza ny alahelony tamin'ny fanapahankevitra noraisin'ny mpitantana. Hatreto, an-jatony ireo mpiasan'ny fampahalalambaovao ao amin'ilay foibe no efa nametraka ny sonian-dry zareo ao anatin'io.
Mpitatitra vaovao fahiny tao amin'ny TVB, Au Ka Lun nanazava ny fomba fiasan'ny biraon'ny fanoratana ao amin'ny TVB taorian'ny namakiany ilay fanambaràna iombonana :
Nosoratana tamin'ny hatsembohana sy rà ny teny tsirairay anatin'io fanambaràna tsotra io. Namaky azy aho ary nahatsiaro ireo fanambaniana sy tolona tsy nisy farany natrehan'ireo mpanao gazety iray tarika taminay. Ny lavaka mangitsokitsoka eo anelanelan'ny idealy sy ny tena zavamisy, ary tolona foana ny famantarana raha toa ka tsy maintsy mijanona na manainga. […]
Amin'ny ankapobeny, ireo mpitatitra vaovao eny ambava-ady dia tsy tomponandraikitra amin'ny antsafa sy ny fandraketana ny zavamisy eny an-kianja. Toy ny mpiasa anaty ozinina izy ireny, mitàna ampahany fotsiny amin'ny famokarana ny vaovao. Rehefa vita ny asan-dry zareo, alefa any amin'ny biraon'ny fanoratana ireo sary. Tsy ry zareo no tomponandraikitra amin'ny lahatsoratra. Tsy ireo mpitatitra avy eny an-kianja no afaka hanapaka hevitra momba ny votoaty. Ao amin'ny biraon'ny fanoratana, betsaka ireo mpamoaka lahatsoratra sy mpaniraka, izy ireo izay eo ambany fiarovan'ny olona iray hafa fanampiny. Ao ambonin'io olona io indray, mbola misy hery matanjaka kokoa. Sady tsy manana fahalalahana no tsy manana fizakantena ireo mpitatitra vaovao ; tsy hanana fahalalahana ry zareo raha tsy hoe resin-tory io olona io, saingy zara raha matory io.
Ireo “hery lehibe kokoa” tanisain'Ing. Au dia ireo endrika samihafan'ny tsindry ara-pôlitika avy any Beijing, toy ny fanendrikendrehana ka hatramin'ny fandrahonana mahery setra mihitsy. Ny ankamaroan'ireo rantsana media ao Hong-Kong dia manao izay hisian'ny marimaritra amin'ny fampidirana ny fanivanantena amin'ny fitantanana ny birao fanoratan-dry zareo, toy ny TVB. Ho an'ireo izay tsy manaraka izany, mivantambantana kokoa ny fandrahonana.
Hatramin'ny 12 Oktôbra, nohetsehina ireo jiolahimboto mpomba an'i Beijing mba hihodidina ny foiben-toeran'ny Apple Daily, gazety mpandàla ny demaokrasia, ary hibahana ny fitsinjarana ny gazetiny. Ny 13 Oktôbra, nobahanan-dry zareo ny fidirana nankao amin'ny Apple Daily ary nosakanan-dry zareo ny famatràrana ny gazety tsy ho ao anatin'ireo kamiao. Toy ny tsy mbola ampy an-dry zareo izay, niharan'ny fanafihana an-tserasera, izay nampihitsoka azy, ihany koa ny tranonkalan'ny Apple Daily, ary tsentsin'ireo antson'ny mpisompatra ireo laharan'antso an-telefaonin'ny biraony.
Na nahazo didy avy amin'ny fitsaràna aza ilay gazety, notohizan'ireo jiolahimboto ny fikapokapohana ny rarivato teo alohan'ny fidirana. Satria tsy niditra an-tsehatra nandrava azy ireo ny polisy tao Hong-Kong, dia ny mpiasa tao amin'ny Apple Daily ihany no nandray an-tànana ny zavatra rehetra ka nifanandrina tamin'izy ireny teny an'arabe.
Ireo mpiasan'ny Apple Daily niatrika ireo jiolahimboto teo anoloan'ny foiben'ny trano fanontàna, nitondra gazety teny an-tànan-dry zareo. Sary: pejy Facebook an'i Chan Pui Man.
Hatramin'ny niventiventesan'i Beijing hoe resaka fiarovana ny firenena no anton'ny nanafoanan'ny filoha faratampony ny firotsahan'ireo kandidà tsy “sitrany” amin'ny fifidianana mivantana voalohany hatao ao Hong-Kong, niditra tamin'ny fampiasàna fepetra henjana ireo solontenany ao Hong-Kong mba hampanginana ireo feon'ny mpanohitra. Fepetra izay tsy hoe fotsiny lasa sakana ho an'ny firoboroboan'ny demaokrasia fa koa manimba ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety, sy ny fototra iorenan'ilay tanànan'ny fandraharahàna ara-bola.